Kuhlehliselwe uLwesibini ukuqosheliswa kwetyala labafundi #FeesMustFall - Vernac News
November 19, 2018 May 2, 2020 Vernac News
Ekapa – Ityala le #FeesMustFall lamatshantliziyo alishumi elinambini lizakuqosheliswa ngoLwesibini ngelokunika ithuba elaneleyo unontlalontle wenkundla ukuba avavanye ukuba abatyholwa bakulungele kusini na ukugwetya ngaphandle kwentolongo.
Eliqela lihlulwe kabini liquka abatyholwa abalithoba kunye nabanye abathathu belivele phambi kweNkundla kaMantyi waseBelville phantsi kwezityholo zokwenza udushe esidlangalaleni ngexesha loqhankqalazo lwemfundo yamahala ngo-2016.
Namhlanje inkundla bekufanele ukuba imamele ingxelo esuka kwiZiko leSizwe lokuKhusela ulwaPhulo-mthetho nokuPhinda uManyanise Aboni (NICRO) ngeqela labatyholwa abalithoba kodwa igqwetha labo uSiya Tsotso uthe eliziko libhalele umtshutshisi ngelithi abazukwazi ukuphumelelisa uhlolo lwababatyholwa phambi kokuba bavele namhlanje. Uhlolo lwabo lushenxiselwe kwi-ofisi kanontlalontle walenkundla nokulindeleke ukuba aluqoshelise namhlanje oluhlolo ze ingxelo yakhe ithiwe thaca phambi kwenkundla ngabatshutshisi ngomso.
Kunjalo nakwiqela labatyholwa abathathu, uhlolo lwabo luzakuqosheliswa ngunontlalontle ze inkundla ifumane ingxelo ngomso.
Ukuba inkundla iyaneliseka yingxelo kanontlalontle omabini lamaqela abatyholwa azakufumana isigwebo sokwenza iinkonzo zoluntu zeeyure ezingamashumi amahlanu (50) ze lichithwe ityala labo okanye lizakuchithwa ityala ze abatyholwa bayalelwe ukuba bafezekise iiyure zabo zesigwebo, ucacise watsho uTsotso. Lonto ithetha ukuba abazubanalo irekhodi lolwaphulo-mthetho.
Olu hlobo lwesigwebo luxhaphaphake kakhulu kumatyala we #FeesMustFall aseNtshona Koloni ngoba amaqela ngamaqela wabafundi ababenamatyala abumila-kunje aye achithwa ziinkundla zeliphondo ebudeni balonyaka. Oku kulandela iintshukumo zabafundi ekudala becenga iziphathamandla ukuba ziwachithe lamatyala kuba enziwa phantsi kweempembelelo zobulungisa. Owayesakuba ngumongameli weli uJacob Zuma wabhengeza iimfundo engahlawulelwayo ekupheleni konyaka u-2017.